"Anti-Russian hysteria" - Russia inoyambira vashanyi vayo nezve kushanya kuMontenegro
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » ushanyi » "Anti-Russian hysteria" - Russia inoyambira vashanyi vayo nezve kushanya kuMontenegro
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Hospitality Industry • Montenegro Kupwanya Nhau • nhau • Russia Kuputsa Nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • USA Kuputsa Nhau
Montenegro inobatana zviri pamutemo neNATO, danho iro vazhinji vanoti rinogona kudzora danho reRussia rekuramba rakadzika kumaodzanyemba kwakadziva kumabvazuva kweEurope.
NeMuvhuro, gadziriro dzaienderera mberi muWashington vachiita mhemberero yekugamuchira Montenegro kujoina zviri pamutemo NATO uye kuve nhengo yechi29 yemubatanidzwa wemauto eWestern.
Iyo yekumisikidzwa inouya mukuvhunduka kweRussia. Russia yakayambira vashanyi nezve kushanya kuMontenegro nepo kutengeswa kwechikafu kwakarambidzwa kubva munyika.
Mutauriri weRussia Foreign Ministry, Maria Zakharova nguva pfupi yadarika akati "kune mhirizhonga inopokana neRussia muMontenegro."
Akawedzera kuti vanhu vekuRussia vanogona kusangana nenjodzi dzakadai se "kusungwa nekuda kwezvikonzero zvekufungidzira kana kudzoserwa kunyika dzechitatu" kana vakashanyira nyika yeSlavic. Moscow yakavimbisawo kuti yaizotsiva zvematongerwo enyika.
Hurumende yeMontenegro yakadzivirira danho iri senzira yekudzikamisa ichiramba kuti inogona kuodza moyo vashanyi veRussia kuti vasashanyire nyika.
"Chimwe chezvikonzero chatiri kujoina NATO ndechekugadzira kugadzikana kukuru, kwete kwevagari vemuMontenegro chete, asiwo kune vekunze vatengesi nevashanyi," akadaro Prime Minister Milo Djukanovic akadaro. "Naizvozvo, chinangwa chedu ndechekuunza vatashanyi veRussia vakatowanda," akawedzera Djukanovic, anga ari mumwe wevanotyaira chibvumirano cheNATO cheMontenegro mumakore apfuura.